खम्पा काण्ड: नेपालबाट मुस्ताङलाई टुक्र्याएर तिब्बत कब्जा गर्न विदेशीले गराएको बिद्रोह !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
राजेन्द्र थापा– खम्पाहरू त्यसताका उत्तरी सीमा क्षेत्र कब्जा गरी चीनमाथि गुरिल्ला आक्रमण तथा मुस्ताङ क्षेत्रका नेपाली जनतामाथि अराजक तथा अवैध शासन गर्थे। तिनै अराजक खम्पाहरूको हतियार लिँदै खम्पाहरूलाई गैरसैनिक जीवनमा पुनस्र्थापना गर्ने कार्यको मूल संघर्ष र सफलता २०३१ सालको यही साउनभदौमा नेपाली सेनाले हासिल गरेको पनि ठ्याक्कै अहिले ४० वर्ष पूरा भएछ। मुस्ताङ र दार्चुलामा गरिएका उक्त अप्रेसनका पूरै अवधि काठमाडौंस्थित जंगी अड्डाको अप्रेसनल सञ्चार केन्द्रको एकमात्र सिग्नल अधिकारी म थिएँ। क्याप्टेन थिएँ म। सार्वजनिक भइसकेका तथ्यांक र मेरा निजी स्मरणका सिलसिलामा म खम्पाकाण्ड यस्तो पाउँछु।
चीनको चेतावनी- खम्पाहरू तिब्बत घुसी आमजनतालाई बलात्कार गर्ने, लुट्ने, घरहरू आगो लगाउने, चौंरी र भेडाहरू मारेर मासु ल्याउने आदि गर्छन् भन्ने आरोपसहित चीन सरकारले नेपाललाई दबाब दियो। चीन आफैं पसेर खम्पा क्याम्पहरू ध्वस्त पार्ने संकेत पनि दियो रे भन्ने पनि सुनियो। २०३१ सालको प्रारम्भमा सेनाका प्रधानसेनापति सिंहबहादुर बस्न्यातलाई एक्सनको आदेश आयो। तत्कालीन सहायक रथी सिंहप्रताप शाहलाई अपे्रसन कमान्डर नियुक्त गरियो, युद्ध भनिएन। सैनिक अभ्यास (तालिम) भनियो। सायद भारत र अमेरिकालाई नचिढ्याउन कूटनीतिक विडम्बना थियो त्यो।
बढ्यो सेना- पोखरामा एकत्रित विभिन्न स्थानबाट आएका फौजलाई संयुक्त संगठनात्मक एकरूपता तथा आपसी मिलाप र समन्वयको चरणपश्चात् मुभ सुरु भयो। पोखरा, नौडाँडा, हिले, घोडेपानी, शिखा, धासा, लेटे र मार्फा हुँदै १ असार २०३१ (१५ जुलाई १९७४) मा जोमसोम पुगे। टुकडीहरू विभिन्न स्थानमा खटिए, तिनले आफ्नो प्रभाव जमाउन फ्लाग मार्च अर्थात् सैनिक मुभमेन्टहरू व्यापक रूपमा गरेर सेना साँच्चिकै खम्पाहरूलाई हटाउनै आएका हुन् भन्ने सन्देश प्रचारित गर्न थाले। भागेको रोक्नलाई पहिले नै बेग्लै रुटबाट छार्का र मनाङमा स्वतन्त्र फौज तैनाथ भइसकिएको थियो। जोमसोममा ब्रिगेडिएर जनरल सिंहप्रताप शाहले ट्याक्टिकल हेक्वा स्थापना गरे। तत्कालै तोपहरूबाट फायरिङ गरी मनोवैज्ञानिक दबाब दिने कार्य सुरु भयो। फौज तैनाथ र मनोवैज्ञानिक युद्धको पहिलो चरणपछि हतियार बुझाई आत्मसमर्पण गर्नु अन्यथा सेना कारबाही गर्न तयार छ भन्ने भाकाको पत्र वाङ्दीलाई सिंहप्रतापले प्रेसित गरे। तत्कालै ५ साउन(२० जुलाई) सम्म आत्मसमर्पण गरी हतियार बुझाइने प्रत्युत्तर प्राप्त भयो।
पौडेल र महराले न्याय पाए कि जनताले न्यायालय र सरकारसँग बिस्वास गुमाए
३० लाख बालबालिकालाई खोप लगाउनेबारे दयाहाङ-केकीको विशेष अपिल भिडियो, जनचेतनाको लागि शेयर गरौ
ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे !
प्रधानमन्त्री-मन्त्रि हुनलाई बिदेशी दुतावास धाउनु, टाउकोको मोल तोक्नेहरुसंगै मिलेर सरकार बनाउनु थियो